Home ASIAN FOOTBALL STORIES Denis Cheryshev Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ndụ eziokwu
Emelitere ikpeazụ September 23, 2018
LB na-egosi Full Story of Russian Winger onye amara aha ya mara; "2018 World Cup Hero". Ụmụaka anyị bụ Denis Cheryshev Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ / ndabere, ezinyere ezinụlọ na ọtụtụ ihe na-emeghị ka ọ mara banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ ya na FIFA 2018 World Cup nke a na-enwe n'obodo ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole ka ị maara ọtụtụ ihe gbasara Denis Cheryshev's Bio nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Denis Cheryshev Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ mbido
Denis Dmitriyevich Cheryshev mụrụ na 26th ụbọchị nke December 1990 na Nizhny Novgorod, Russia. A mụrụ ya nna ya, Dmitri Cheryshev onye bụbu onye na-agba egwú Russia na ugbu a bụ onye njikwa.
Denis tolitere ya na Danny nwanne ya nwoke ma o jiri oge ya na nna ya a h ur u buru ibu buru ibu, n'adịghi ka nne ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke ma nwa ma papa.
Kemgbe nwata, Denis kwenyesiri ike na ọ ga - abụ onye na - egwu egwuregwu n'ọdịnihu. Denis gbasoro nzọụkwụ nna ya ma nwee obi ụtọ n'ịgba football. Nna ya Dmitri Cheryshev, n'aka nke ọzọ, nyeere aka ịtọ ntọala dị mkpa iji hụ nwa ya ọ hụrụ n'anya site na nrọ ya bụ ihe efu efu. Dmitri papa ya bụ onye a ma ama nke FC Dynamo Moscow tupu ya agafe Europe. Ọnọ na Europe na-emetụta ọdịdị ezinụlọ ya.
Denis Cheryshev Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ibi Spanish
Mgbe Denis dị afọ ise, nna ya bụ ndị ịgba ọsọ ụkwụ nwetara onyinye sitere na Club Spanish, Sporting de Gijón. Dmitri nabatara onyinye a, ọ hapụrụ Russia wee kwaga ezinụlọ ya na Spain. Mgbe ọ na-edozi na Spen, ọ na-ahụ ihe mgbochi nke asụsụ ka ọ bụrụ nnukwu nsogbu ma na-agba nwunye ya na ụmụ ya aka, karịsịa Denis bụ onye ga-abanye na ụlọ akwụkwọ egwuregwu. N'ịmara otú ọ ga-esi bụrụ ihe ọjọọ, Denis ga-amụ asụsụ Spanish ngwa ngwa.
Little Denis gara ụlọ akwụkwọ na-akwadebe asụsụ Spanish na-amụ asụsụ Spanish na onye nkụzi ya.
N'ime ọnwa ole na ole mbụ, ọ na-esi ike ịghọta okwu n'asụsụ Spanish n'enweghị enyemaka onye nsụgharị.
Ka o sina dị, mgbe obere oge gasịrị, Denis maara asụsụ omenala Spanish ma mụta otu esi asụ asụsụ Spanish dị ka nwa amaala.
Denis Cheryshev Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ọrụ Ọganihu
Oge ụfọdụ mgbe nlọghachị na ọzụzụ Spanish, obere Denis malitere ịga ụlọ akwụkwọ egwuregwu nke Sporting FC, nke nna ya na-egwu n'oge ahụ. Ọ bụ 6 afọ mgbe ọ sonyere Sporting Gijon agụmakwụkwọ, na-anọ ruo mgbe ọ bụ 9.
Denis Cheryshev esiri soro nna ya gaa n'ogbo ya ọzọ, Burgos, na-abanye na nwata ya n'oge 9 dị na afọ 2000. Mgbe afọ abụọ nke ịkụ egwú na Burgos, Real Madrid bịara kpọọ. Denis Cheryshev sonyeere Real Madrid ka a na-ele ya anya dị ka ezigbo talent n'oge ule ya. N'okpuru ebe a, ntakịrị Denis Cheryshev dị na uwe elu Real Madrid.
Denis Cheryshev bụ akụkụ nke Real Madrid maka afọ 14, na-esonyere ọgbakọ ahụ mgbe ọ dị afọ 12. N'ụlọ ndị ntorobịa, ọ hụrụ onwe ya na-eto ngwa ngwa site na nwa okorobịa na-eto eto na okenye.
Na 2009, Denis Cheryshev tinyere ndị òtù B na ọnọdụ B ma gaa n'ihu na-atụle ihe mgbaru ọsọ 22 na egwuregwu 109 n'okpuru mkpado nke Zidine Zidane. N'oge ahụ, e nyere ya "The Best Shooter na Real Madrid Ntorobịa Team. "Mgbe nke ahụ gasịrị, a kwalitere ya na ndị òtù Real Madrid.
Ihe mere O ji hapụ Madrid: Denis Cheryshev dị n'okpuru ebe a na-egwu naanị egwuregwu abụọ maka ndị ọrụ Real Madrid ọ malitere ime ka oche ahụ dị ọkụ n'ihi asọmpi siri ike n'etiti ndi okenye na ndi ozo. N'okpuru ebe a bụ Denis Cheryshev na Real Madrid Senior Team.
Mgbe enwere ihe mgbu n'ile anya ruo ọnwa ole na ole, Denis nwere nkụda mmụọ na ụlọ. Na usoro ịzụrụ mbụ ma na-emepe emepe nke abụọ, Real Madrid, ọ dị mwute ikwu na ọ bụ nwa Cheryshev. Denis 'rịọrọ ka ha pụọ ​​n'ụgbọ ahụ ekweghị, na-ahapụ ya na nhọrọ nke a ego.
Denis chọtara ụzọ ọ ga-esi gbaga na Sevilla, Villarreal na Valencia iri atọ. N'ikpeazụ, o sonyere Villarreal mgbe ọ nụsịrị akara aka na 2016.
The Russia 2018 World Cup Fame: Denis Cheryshev ama ama ama ke ini enye ọkọbọde ke 2018 FIFA World Cup. Enweghị ede ihe dị ukwuu, a na-achịkọta ịrị elu ya ma ama ya na foto dị n'okpuru ebe a.
Ndị ọzọ, dị ka ha ga-asị, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Denis Cheryshev Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Ee, o nwere ike ọ gaghị adị mma dị ka Fyodor Smolov elere anya ya na nwunye ya, ma Denis Cheryshev na-abanye na nke 10 kachasị mmasị ndị egwuregwu Russia ma nye gị ihe kpatara nke a. Enweghi ike inweta nkwado a n'ihi oru ya na Russia 2018 FIFA World Cup, ma n'ihi echiche nke Europe. Eziokwu bụ, ụmụ agbọghọ, na-enwe mmasị na Denis 'echiche Europe n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ ka bụ nwa akwukwo n'oge ederede.
N'ikwu okwu banyere ihe ndị masịrị ya, naanị otu nwanyị na-ezute Denis. Ọ bụghị onye ọzọ Cristina Cobo ya na nwoke ya. Cristina na Denis nọ na mmekọrịta ha kemgbe 2016.
Nwanyị nwanyị mara mma na Russian mara mma nke Denis Cheryshev mụtara na Madre Ventura Sagrado Corazon Castellon na Mahadum West West Scotland tupu ya abanye na Universitat de Valencia ebe ọ zutere nwoke ya. Nwanne ya ejima mara mma Maria na mama ya bi ugbu a na Span.
Dị ka ọ na-ede, Cristina dị ugbu a bụ onye ọka iwu na-arụ ọrụ na Arenal Sound na Borriana, obodo dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Spain.
Denis na-enwe obi ụtọ na-ekwusara foto nke enyi nwanyị ya, Cristina Cobo na saịtị Instagram ya. Otú ọ dị, Denis ekwughị ihe ọ bụla na-adịbeghị anya banyere atụmatụ ya n'ọdịnihu maka Cristina.
Denis Cheryshev Child Story Plus Ihe na - emeghị ka ọ bụrụ eziokwu -Ezigbo Ezinụlọ
Ezinụlọ Denis Cheryshev abụghị ụdị ndị Russia na-emekarị ụdị ụlọ obibi ahụ na ndị na-adịghị achọ ịhapụ mpaghara ha na-akasi obi iji malite nsogbu ọhụrụ n'èzí.
Denis Cheryshev bụ nke ezinụlọ ahụ bụ ndị na-ejikọta stereotype na nkwenkwe na ha nwere ike ịba ọgaranya na mba ndị ọzọ ma e wezụga Russia. Denis Cheryshev si na nne ya, nna ya, nwanna nwoke, nwanne ya nwoke, nwanne ya, na ndị ikwu ya ndị ọzọ amụtala ịnọpụ iche na usoro Russia.
Iji mee ka nkwenkwe ahụ guzosie ike, ọbụna nna Denis, Dmitri Cheryshev lara ezumike nká site na ọrụ ya na-enweghị obi abụọ ọ bụla ịrara onwe ya nye n'ịkwalite nwa ya nwoke na football dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru.
Ebumnuche ya bụ ime ka ọ ghara inwe agụụ ụlọ. N'oge ụfọdụ, nna Denis kpebiri ịghọ onye nchịkwa football. Mkpebi a nke nna ya bara uru maka Denis. N'okpuru ebe a bụ foto nke Dmitri dị ka njikwa.
Dịka Denis Cheryshev ezinụlọ na-echegbu onwe ya, oge ikpeazụ ha na-echere otuto ga-emesị kwụsị. Denis 'egosiputa na Russia 2018 World Cup emeela ka ọ gbanwee ọrụ ya, ndụ onwe ya na ezinụlọ ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Denis Cheryshev Child Story and untruth bio facts facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Bọchị gbanwee: Mee 13, 2020
Bọchị agbanwee: Disemba 26, 2019
Bọchị gbanwee: Mee 4, 2020
Ifiedbọchị agbanwee: November 25, 2019